Mianara mikasika glasy maina na gazy karbônika
Mianara mikasika glasy maina na gazy karbônika matanjaka
Ny gripa maina dia endrika matanjaka amin'ny gazy karbonika matanjaka, CO 2 . Ireto misy zava-baovao momba ny ranomandry izay afaka manampy anao hiaro anao rehefa miasa aminy (ary mahafinaritra fotsiny ny mahafantatra.)
Ny gripa maina dia dioksidana karbonika matanjaka. Indraindray antsoina hoe "cardice" izany.
Ny hafanana mangatsiaka dia mangatsiaka be (-109.3 ° F na -78.5 ° C). Amin'io mari-pana io dia manalokaloka avy ao amin'ny fanjakana miorina ao amin'ny fanjakana mandevona izy io, na mitrandraka amin'ny gazy ka hatramin'ny mafy. Mba hisian'ny gara maina hikorisa dioksididana karbonika, dia tokony hapetraka ao anatin'ny tontolo faran'izay mavesatra izy.
Ny fandinihana voalohany ny gilasy maina dia tamin'ny taona 1835, nataon'ny mpahay simia Frantsay Charles Thilorier. Nanamarika ny fananganana glasy maina izy rehefa nosokafana ny fitoeran-drano misy gazy karbonika.
Ny arintany maina dia mitovy amin'ny ranomandry na ranomandry . Matetika no amidy toy ny akondro na pellets izay miseho fotsy satria ny vovon-drano avy eny amin'ny rivotra dia mivadika mora foana. Na dia toa sahala amin'ny ranomandry ranomandry aza izy io, antsoina hoe "maina" satria tsy misy voka-dratsin'ny hafanana.
Ny lanjan'ny gilasy dia matetika miavaka eo anelanelan'ny 1.2 sy 1.6 kg / dm 3 .
Ny lanjan'ny molekiolan'ny gripa maina dia 44.01 g / mol.
Ny gilasy maina dia tsy polisy, miaraka amin'ny fotoana fohy amin'ny zero. Manana thermal and electrical conductivity.
Ny lanjan'ny maina manokana dia 1.56 (water = 1). Misy ranom-panafody ao anaty rano sy any ambanin'ny faran'ny zava-pisotro.
Ny vovon-tsetroka entina rehefa voasesika ny gaza maina dia ahitana gazy karbonika, fa ny ankamaroan'ny rano no mamokatra rehefa manondraka rano avy amin'ny rivotra ny gazy mafana.
Raha manampy amin'ny sakafo ny gripa maina, toy ny rehefa manamboatra mofomamy na voankazo mangatsiaka , dia miteraka ny rano ny gazy karbonika ary afaka mihetsika miaraka amin'ny rano mba hamboly asidra karbonika. Manampy tsiranoka na tsiro izany.
Raha sublime ny glasy maina, mifangaro avy hatrany ny gazy kôngôla avy hatrany amin'ny rivotra, fa ny sasany amin'ireo lavaka mangatsiaka mangatsiaka. Ny fiakaran'ny gazy karbonika dia mitombo eo akaikin'ny tany amin'ny efitrano misy toerana misy ranomandry maina.
Fiarovana amin'ny gilasy
Ny fifandraisana amin'ny gilasy maina dia afaka miteraka hafanana sy mangirifiry mangatsiaka. Aza avela hifandray amin'ny gilasy maina sy ny hoditra, ny maso, na ny vava.
Ampiasao ny fonon-tànana misy alikaola rehefa mafana ny ranomandry.
Na dia tsy misy poizina aza ny gripa maina sy gazy karbonika, ny fampiasana ny ranomandry dia mety hanimba ny aretin-tsaina noho ny alàlan'ny alàlan'ny rivotra sy ny fanodinana ny rivotra manakaiky ny tany na rehefa mifangaro amin'ny rivotra, dia misy dioksidana karbôn kokoa (tsy ampy oksizenina) . Ampiasao ny ranomandry maina ao amin'ny faritra mafana .
Aza mihinana na mangalatra gilasy maina.
Aza asiana gilasy maina na fitaratra hafa mihidy, satria mety hiteraka korontana na fanimbana ny fanerena.
Nahoana no maina ny volony?
Inona no atao hoe Prepregs
Biôlôjika sy suffixes: -troph na -trophy
Famaritana ny Quarks amin'ny Fizika
Ny mineraly amin'ny loko metaly
Ny sisa tavela
Ampaham-potoana ny fitomboan'ny ampaham-batana sy ny fomba fiasa
Fiovana ara-batana sy ara-batana
Fahatakarana ny sombin-tsakafo
Fihetseham-po diso toerana
Ahoana, rahoviana, ary nahoana no tokony hampiasana ny fisintahana amin'ny Capsales Frantsay
Palladian Window - Ny endriky ny elatra
'Mariho ilay baolina' sy 'Fanamarihana ny baolina golf'
Inona ny fiavian-tsarin'ny Aurora Borealis?
Azoko Atao ve ny Fitrandrahana Olana Amin'ny Alikaola?
Washington College GPA, SAT sy ACT Data
Zavatra Zava-mahaliana mikasika an'i Warren G. Harding
Ny Fanjakana Napoleona
Toe-javatra misy ankehitriny ao Iran
Glow Jell-O Recipe
Mifoka rongony ho any Kanada - miverina any Kanadà
New Ontario College Admissions
Heterozygous: Famaritana ny Genetics
Ahoana no nanombohan'ny Hetsika Freedom Riders?
Tari-dalana ho an'ny Economy
Exophora (mpisolo anarana)
IRAC fomba fanoratana ara-dalàna
Ahoana ny Dragonflies Mate
Miezaha tsy hibanjina an'io faniriana maloto io
Inona no atao hoe tendron'ny tsipika?
Firafitry ny mpanao heloka bevava malaza
Ny Reniranon'i Ganges